दीपाश्रीले “राजेश हमाल महानायक होइन” भनेपछि दीपकराजले लेखे यति लामो स्टाटस
July 1, 2020 2652
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा फिल्मी कलाकारहरु एक अर्कालाई टिप्पणी गर्नमा विताइरहेका छन् । फिल्म निर्माता र कलाकारहरुको अहिले सामाजिक सञ्जालमा वार नै चलेको भन्दा पनि हुन्छ ।
नायक पल शाहले नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा कलाकारले पारिश्रमिक नपाउने भन्दै स्टाटस लेखेपछि सुरु भएको वार अहिले अभिनेता तथा फिल्म निर्माता भुवन केसी र अभिनत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहबीचको वार सम्म पुगेको छ ।
आज म लेख्दैछू।।।।।। अन्तरवार्ता देखि होशियार । केहि दिन देखि देखिरहेको छू कलाकारहरू ले अन्तरवार्तामा मा बोलेको कुरा एकपछि अर्को बिबा’दमा आइरहेको छ । कोहि राष्टियताका बारेमा चिप्लिरहेका छन् । कोहि देशको जिल्ला , प्रदेशको बारेमा चिप्लिय । कोहि सुपरस्टार को हो भन्ने बारेमा चिप्लिए । कोहि नेपोटिज्मका बारेमा, कोहि के मा कोहि के मा ।।। यो सबै किन भैरहेछ ?
अन्तरवार्तालाइ नाइ भन्न नसक्ने हाम्रो बानिले गर्दा । पत्रकार भाइले फ़ोन गर्यो “ लौ न अन्तरावर्ता दिन पर्यो , क्यामाराको ढक्कन खोल्यो सुरू भैहाल्यो , टेडा मेडा प्रश्नको झटारो सुरू हुन्छ।।।।
हामि कलाकार बिना तैयारी पत्रकार रिसाउला भनेर कनि कनि बिना तैयारी बोल्न सुरू गर्छौ । जसो जसो अन्तरवार्ता अगाडि बढ्छ, हामि कलाकारको जिब्रो चिप्लिन थाल्छ ,ब्यबसायिक पत्रकार मनमनै खुशि हुन थाल्छ ।
आहा , ओहो, टिआरपी , !! पत्रकार ले फेरी उत्साहित हूदै सोध्न थाल्छ “मुस्तागं कुन जिल्लामा पर्छ था छ ? कलाकारले एकछिन टाउको कनाउदै जवाफ दिन्छ, “मनागं जिल्ला होला “ हाहाहाहा लामो हॉसो पनि जान्छ ! पत्रकार कुटिल हॉसो हॉस्छ, कलाकार र पत्रकार बिचको अन्तरवार्ता शाखा अधिकृतको जागिरको लागि लिइएको अन्तरवार्ता जस्तो हुन थाल्छ ।
कलाकार चूपचाप नजानेको बिषयमा बोल्दै जान्छ, अन्त्यमा ,आज त गज्जब भो अन्तरवार्ता भोलि हेर्नुस है भन्दै पत्रकार खुशि साथ बिदा हुन्छ ।।। भोलि अन्तरवार्ता आउदैन , अन्तरवार्ता संग संगै आपत आइलाग्छ ।
जताततै भाइरल, बिरोध, गालिको बर्षा । त्यसपछि कलाकारको निन्द्रा कमसेकम ३ दिनको लागि गायब ।। हामि किन यसरी बिना तैयारी बोल्न अगाडि सर्छौ रु किन बारम्बार चिप्लेर लज्जित हूदै मा’फि माग्छौ, अन्तरवार्ता दिदॉ सेन्सेटिभ किन हूदैनौ हामि ? सबै पत्रकारको नियत राम्रो हुदैन !!
७० प्रतिशत त टिआरपी र हेडला’इन को चक्करमा हुन्छन् । अनि किन हामि सधै उनिहरूको यो टिआरपी को ट्रुयाप’मा परेर आफ्नो ब्यक्तित्व कमजोर बनाइरहेका हुन्छौ १ राम्रो नियत भएको, हेडलाइनमा जोड नदिने , सकारात्मक पत्रकारीता गर्ने साथि’हरू लाइ हामि कहिल्यै स्थान दिदैनौ।
यस्तै चटपटे हेड’लाइन सेलर हरूका लागि २४ घन्टा उपलब्ध हुन्छौ हामि ,चलचित्रको प्रमोशन देखि हरेक कु’रामा कुनै सिमाना राख्दैनौ, अन्तरवार्तालाइ सामान्य रूपमा लियौ र लिन्छौ पनि ।
घन्टौ क्यामारा अगा’डि फतफ’ताएर आफूले आ’फूलाइ धेरै पल्ट सस्तो पनि बनायौ !!! अब यस बारेमा सोच्ने बेला आयो कि ? याद गरौ पछिल्लो केहि दिनलाइ, कोहि राष्ट्री’यता बारेमा सचेत हुदॉ हुदै कुरा स्पष्ट भन्न नसक्दा फन्दामा परे, कोहि राजेश हमाल सु’परस्टार हो कि होइन भन्ने बारेमा चिप्लिए ।
उहॉले सुप’रस्टार हो तर यो क्षेत्रकों अभिभा’बकत्व पनि निभाउन पर्यो भन्न खोज्दा शब्द संयोजनमा स’मस्या उत्पन्न भइ सुपर स्टार नै होइन भन्ने बुझिन गयो, पूरा अन्तरवार्ता त कस्ले हेर्ने यॉहा ? कोहि कलाकार १४ जिल्लामा फसे, एउटा कलाकारले सामान्य ज्ञान कन्ठ गर्नै पर्छ ? प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाइ पनि हंगेरीको प्रधानमंत्री को नाम था होला ?
भिमसेन थापा पछि को प्रधान’मंत्री थिए था होला ? केपि ओली ज्यूलाइ पहिलो कलर नेपाली फ़िल्म कुन हो था होला ? सबैलाइ सबै कुरा था हुनु ज़रूरी छैन, कोहि कलाकार का सबालमा बोल्दा चिप्लिए जबकि नेपालमा चलचित्र उद्यो:ग नै बाल्यकाल मैं छ, यस्ता अन्तरवार्ता त बिकसित उद्योगमा हुने कुरा हो ।
त्यसैले हा’मिले अरूलाइ दोष दिनु भन्दा सकेसम्म चट’पटे अन्तरवार्ता हरू बाट भागौ, अन्तरवार्ता दिदॉ छानेर, बुझेर, प्रसस्त तैयारी गरेर दिऔ । चित्त नबुझेको कुरा पत्रकारलाइ अनुरो’ध गरेर यो चाहि काुटिदिनुस यो चाहि नबोलौ होला भन्ने गरौ !
दोष पत्रकारको मात्रै छैन हाम्रो पनि छ , चलचित्र प्रमोशनको समय देखि हरेक दिन हामि अन्तरवा’र्ता का लागि लालायित हुने , यस्का लागि पत्रका’र संगको अत्याधिक सामिप्यता राख्ने , सबै आन्तरिक कुरा खोल्ने ,यस्ता कुराहरूमा हाम्रो पनि कमजोरी छ
अत अन्तरवार्ता को ‘लागि फोन आउछ भने खुशि होइन, होशियार होऔ, सकेसम्म टारौ, नसके पत्र’कार संग प्रसस्त छलफल गरेर आफू पूर्ण रूपमा तैयार भएर मात्रै अन्तरवार्ता गरौ, आफ्नो ब्यक्तित्व , आधा घन्टाको अन्तरवार्ता बाट स्वाहा नपारौ ।।।।। जय नेपाली चलचित्र
Prevभोलि असार १८ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextआज असार १८ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
मनपरेकी केटी भाउजु भएर आएपछि… फेरि पहिलेको जस्तै सम्झेर उनलाई समा`उँदा….